अन्तराष्ट्रिय खबर – Page7– rastriyakhabar.com
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बेलायतमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या ६० पुगेको छ । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले बेलायतमा हालसम्म कोरोनाका कारण ६० जना नेपालीको मृत्यु भएको सोमबार पुष्टि गरेको हो। दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणले..
प्रधानमन्त्री मोदीको काठमाडौंमा पुत्ला दहन
काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक बनाएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । काठमाडौंको कलंकीमा आइतबार बेलुकी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन गरिएको छ । लिपुलेकमा एकतर्फी सडक बनाएर उद्घाटन गरेपछि भारतीय कदमको सडकदेखि सदनसम्म बिरोध भइरहेको छ । विवादीत क्षेत्र स्वीकार गरेको..
अमेरिकामा कोरोना भाइरसले ७८ हजार भन्दा बढीको मृत्यु
शनिबार, बैशाख २७, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । ४ महिनाभन्दा बढी समयदेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकामा ७८ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ हजार ६२९ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै कुल मृतक संख्या ७८ हजार ५५७ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ २७ हजार ९८६ जना नयाँ संक्रमित..
नेपालमा रोकिएका २८१ अष्ट्रेलियन नागरिक स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले २८१ विदेशी नागरिक बोकेर अष्ट्रेलिया उडेको छ । लकडाउनका कारण नेपालमा रोकिएका १७ बालबालिकासहित २८१ अष्ट्रेलियन नागरिक बोकेर निगमको वाइड बडी जहाज सिड्नीका लागि उडान भरेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ..
लकडाउनका कारण भारतमा बेरोजगारीदर २७.१ प्रतिशत पुग्यो
बुधबार, बैशाख २४, २०७७ मा प्रकाशित
लकडाउनका कारण भारतमा बेरोजगारी दर ह्वात्तै बढेको छ। सेन्टर फर मोनिटरिङ इन्डियन इकोनमी (सीएमआईई) का अनुसार ३ मे मा समाप्त भएको सप्ताहमा देशमा बेरोजगारी दर बढेर २७.१ प्रतिशत पुगेको हो। अप्रिलमा देशमा बेरोजगारी दर बढेर २३.५ प्रशित थियो। अप्रिल महिनामा मात्र बेरोजगारी दर १४.८ प्रतिशतले बढेको थियो। १३०..
कोरोना संक्रमणविरुद्धको लडाइँ जित्नेछौं : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज सिंहदरबारस्थित एक्सन कक्षबाट असंलग्न आन्दोलन (नाम) को सम्पर्क समूहको अनलाइन शिखर सम्मेलनमा सहभागी भए । सम्मेलनको उद्घाटन अजरबैजानका राष्ट्रपति एवं नामका अध्यक्ष इल्याम एलियेबले गरेका थिए । संवादमा विश्वव्यापी महामारी भइरहेको कोरोना भाइरसको रोकथाम र..
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या २०९,००१ पुग्यो
काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या २ लाख ९ हजार १ पुगेको छ । संक्रमितको संख्या बढेर ३० लाख २५ हजार ७ सय २४ पुगेको छ । अहिलेसम्म ८ लाख ९३ हजार १ सय ९६ उपचारपछि घर फर्किएका छन् । ५७ हजार ४ सय ६१ जनाको अवस्था गम्भीर छ । आज अहिलेसम्म अमेरिकामा ५ सय ९६, स्पेनमा ३ सय ३१, इटलीमा ३ सय ३३, इरानमा ९६,..
कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकामा मृतक संख्या ५५ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । करिव ४ महिनादेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकामा मृत्यु हुने मानिसको संख्या ५५ हजार नाघेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म थप १ हजार १४० जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोनाको संक्रमणबाट अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या ५५ हजार ३९६ पुगेको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा त्यहाँ २६ हजार..
कोरोना संक्रमणका कारण बेलायतमा ३१ जना नेपालीको मृत्यु
बेलायत । बेलायतमा कोरोनाका कारण ३१ जना नेपालीको ज्यान गएको छ । लण्डनस्थित दूतावासका अनुसार शनिवारसम्मको तथ्यांक अनुसार ३१ नेपालीले बेलायतमा ज्यान गुमाएका हुन् । लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता शरदराज आरणले बेलायतमा आज शनिबारसम्म ३१ जना नेपालीको कोरोना संक्रमणबाट..
कोरोनाबाट अमेरिकामा ५०,२४३ को मृत्यु : कुन राज्यमा कति ?
एजेन्सी । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अमेरिकामा मात्रै ५० हजार २ सय ४३ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा २० हजार ८ सय ६१ जना न्युयोर्कका मात्र रहेका छन् । अमेरिकामा संक्रमित ८ लाख ८६ हजार ७ सय ९ जनामध्ये न्युयोर्कका २ लाख ६८ हजार ५ सय ८१ जना रहेका छन् । न्युयोर्कपछि न्युजर्सी प्रभावित भएको छ । त्यहाँ ५..
मे २७ मा मानवसहितको यान अन्तरिक्षमा पठाउँदै
अमेरिका । करिब दश वर्षपछि अमेरिकी अन्तरिक्ष सम्बन्धी निकाय नासाले अन्तरिक्षमा मानवसहितको यान पठाउने घोषणा गरेको छ । यानमा दुईजना अन्तरिक्षयात्री अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेशन (आइएसएस)तर्फ जानेछन् । रकेट र अन्तरिक्ष यान फ्लोरिडाको केनेडी स्पेश सेन्टरबाट २७ मे का दिन उडाउने योजना नासाले..
एजेन्सी । अमेरिकामा कोरोनाको संक्रमण कायम रहेसम्म हरेक अमेरिकीलाई मासिक दुई हजार डलर दिने प्रस्ताव अमेरिकी संसदमा प्रवेश गरेको छ । डेमोक्रेटिक सांसद टिम यारन र रो खन्नाले ‘इमर्जिन्सी मनी फर द पिपल एक्ट’ संसदमा प्रस्तुत गर्दै उक्त प्रस्ताव अमेरिकी हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभमा प्रस्तुत गरेका हुन्..
अमेरिकासंग नडराउने यी हुन विश्वका ९ देश ! जो लड्नलाई तयार छन्
अमेरिकामा कोरोना भाइरसले पछिल्लो २४ घण्टामा १५ सय बढीको मृत्यु
अमेरिका । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण अमेरिकामा पनि तीव्र देखिएको छ । अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ५ सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । योसँगै अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या २३ हजार ६१० पुगेको छ । अमेरिकामा एकैदिन २६ हजार ७७ जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमित..